Heino Yakakura Runyorwa rwe Instagram Nyaya Mienzaniso uye Nyaya Dzidziso
Chitatu, October 31, 2018 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Isu takagovana chinyorwa chakapfuura, Zvese Zvaunoda Kuti Uzive Nezve Instagram Nhau, asi mabhenji ari kuvashandisa sei kutyaira kushambadzira nekutengesa? Sekureva kwe #Instagram, 1 mu3 yenyaya dzinoonekwa zvakanyanya dzinobva kumabhizinesi Instagram Nyaya Statistics: Mamirioni mazana matatu evashandisi anoshandisa nyaya zuva nezuva pa Instagram. Vanopfuura makumi mashanu muzana emabhizinesi pa Instagram vakaita Instagram nyaya. Vanopfuura 300/50 vevashandisi ve Instagram vanoona Instagram nyaya mazuva ese. 1% yenyaya
Netra ndeyekutanga kugadzira Image Kuzivikanwa tekinoroji kunoenderana neAI / Yakadzika Kudzidza kutsvagisa kwakaitwa kuMIT's Computer Science uye Artificial Intelligence Laboratory. Software yeNetra inounza chimiro kune yaimbove isina kugadzirwa mifananidzo pamwe nekujeka kunoshamisa. Mukati memamiriseconds mazana mana, Netra inogona kumaka mufananidzo wakavhenekerwa marogo emavara, mamiriro emifananidzo, uye hunhu hwemeso emunhu. Vatengi vanogovana mamirioni mabhiriyoni matatu emifananidzo pasocial media mazuva ese Mukati memifananidzo yakagovaniswa munharaunda mune ruzivo rwakakosha nezve zviitiko zvevatengi, zvido,